नेपालमा कसरी भित्रियो एमसीसी? नेपालले गर्न खोजेको के हो ? यस्तो छ १८ वर्षको लामो इतिहास - Himali Patrika
नेपालमा कसरी भित्रियो एमसीसी? नेपालले गर्न खोजेको के हो ? यस्तो छ १८ वर्षको लामो इतिहास
हिमाली पत्रिका ५ माघ २०७६, 4:03 am
मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आ तंककारी हमला भएको थियो । ९/११ हमलापछि आ तंकवादको एउटा महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो । अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० टि्रलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० टि्रलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अली बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाव पर्‍यो ।
(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख अनलाइन खबरबाट साभार )